Rohingya Students Forum: အာမီရ်ခါန်းရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းတချို့
* တနင်္ဂနွေသား မျိုးရိုး *
အာမီရ်ခါန်းဟာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ မွမ်ဘိုင်၊ မဟာရာချတြာ ၌ အဘ တွာဟဲရ် ဟူစိန်း (ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သူ) နှင့် အမိ ဇီနာသ်ဟူစိုင်း တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မွေးချင်း လေးယောက်အနက် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အမိရ်ခါးန်ရဲ့ အမည်ရင်းက မိုဟမ္မဒ် အမိရ် ဟူစိန်ခါန်း (Muhammad Aamir Hussain Khan) ဖြစ်ပါတယ်။
အမိရ်လေး ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ အတူ
အမေ အမနဲ့ အတူ တွေ့ ရတဲ့ အမိရ်ခါးန် အမေကတော့ အမိရ် အသဲကျော်ဖြစ်ပြီး
ဒီဘက်က အမိရ်အမကတော့ မင်းသား အင်မ်ရားန်ခါးန်ရဲ့ အမေပါ။
အမိရ် ရဲ့ ဦးလေး နာဆဲရ်ဟူစိုင်းက ရုပ်ရှင်လောကမှာ လူသိများတဲ့ ဒါရိုက်တာ၊ မင်းသား၊ ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါ တယ်။ သူ့ဦးလေး အငယ်ဆုံး တွာရီခ် ဟာ Yaadoon Ki Baaraat ရဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္ဒီ၊နေရူး နဲ့ အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာ အတွေးအခေါ် ပညာရှင် အဗူလ် ကလာမ် အာဇားဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး အဗ္ဗဒွလ် ကလာမ်အာဇားဒ် ဟာ အမိရ်ခါးန်ရဲ့ ဦးလေးတော်ပါတယ်။ အမိရ် ဖခင်ရဲ့ အကိုတ၀မ်းကွဲပါ။ ဒါကြောင့် သူ့ ရဲ့ နောက်ဆုံးသား အမည်ကို အဖိုးနဲ့ အမည်တူ အဇာဒ်ခါးန်လို့မှည့်ခေါ် ထားပါတယ်။
အိန္ဒိယ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဂန္ဒီ၊နေရူးနဲ့ အာဇားဒ် [ဦးထုပ်နဲ့ မျက်မှန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
အမိရ်ခါးန်ရဲ့ ဦးလေး မောင်လာနာ အဗူလ် ကလာမ်အာဇားဒ် ဖြစ်ပါတယ်။]
၃) မ- ဖာရ်ဟာတ်ခါန်း
၄) နီခါတ်ခါန်း တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
* ပညာရေးနဲ့ အနုပညာခရီးအစ *
မွမ်ဘိုင်းမှာ ဂျေဘီ၊ ပတိတ် ကျောင်း၌ အခြေခံပညာသင်ယူနေရင်း အသက် (၈) နှစ်အရွယ်တွင် ဦးလေးရဲ့ ရုပ်ရှင်ကား Yaadon Ki Baaraat (၁၉၇၃)၌ စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ နောက်နှစ်တွင် သူ့အဖေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Madhosh ရုပ်ရှင်ဇာတ်၌လဲ ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ စိန့် အေနီ အထက်တန်းကျောင်း၌ ရှစ်တန်းထိ တက်ခဲ့တယ်။ ကိုးတန်းနဲ့ ဆယ်တန်းကို ဘုံဘေ စကော့တစ်ကျောင်း၊ မာဟီးမ်၌ သင်ယူပြီး ၁၁ တန်း နှင့် ၁၂ တန်းကိုမူ နာရဆီ မုန်ဂျီ ကော်လိပ်၊ မွမ်ဘိုင်မှ အောင်ခဲ့တယ်။ အမိရ် အထက်တန်းအထိ ပညာသင်ပြီး ကျောင်းထွက်ကာ အနုပညာလောကမှာ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာအဖြစ် Manzil Manzil (1984) အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ရုပ်ရှင်ကားတချို့ မှာ အရံအဖြစ်လည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာတော့ အမိရ်ခါးန်ရယ်လို့ မှတ်ကျောက်တင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမိရ်ခါးန်ရဲ့ ပထမဆုံး ဦးဆောင်မင်းသားအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Qyamat se Qyamat Tak ရုပ်ရှင်ဟာ အိန္ဒိယတခွင် အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဘောလီးဝုဒ်မင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
* အားကစား *
အမီရ်ဟာ တဲနစ်ကစားနည်း၌ ဝါသနာပါပြီး ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခန့်တွင် ပြည်နယ် ချန်ပီယံ အဆင့်အထိ ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၁၄ ခု၌ International Premier Tannis League ပြပွဲ၌ ပါဝင်ကာ ကမ္ဘာကျော် တဲနစ်ချန်ပီယံတွေ ဖြစ်တဲ့ Roger Federer, Novak Djokovic. နှင့် Sania mirza တို့နှင့်အတူ နှစ်ယောက် တစ်တွဲ ကစားခဲ့ဖူးတယ်။ ၂၀၁၄ ခု ဖောဖော်ဝါရီလ တရုတ်ခရီးစဉ်၌ Ping Pong စားပွဲတဲနစ်ပြိုင်ပွဲကို အိုလံပစ် ချန်ပီယံဟောင်း Liu Guoliang နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တယ်။
* အိမ်ထောင်ရေး *
အမိရ် နဲ့ ရီနားတို့ အိမ်ထောင်ရေးမပြိုကွဲခင် Laggan ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ
ဇနီးမောင်နှံနဲ့ အမိရ်တို့ဇနီးမောင်နှံ
အမိရ်ခါးန် အဲ့ကား မတိုင်ခင်ကတည်းက Rena Dutta နဲ့ ၁၉၈၆ ခု ဧပြီလ ၁၈ ရက်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပါ တယ်။ အမိရ် က မွတ်စလင်မ်ဖြစ်ပြီး Rena က ဟိန္ဒူဖြစ်တာမို့ Rena မိဘတွေ သဘောမတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ ၂ ဦး လက်ထပ်ထားတာကို လူသိမခံခဲ့ပါဘူး။ Qyamat se Qyamat Tak ရုပ်ရှင်ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ Rena ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထွက်ပြီး ၂ လအကြာမှာတော့ အမိရ်က သူလက်ထပ်ထားကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူမှ သားသမီး နှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့တယ်။ သူ့ကို ၂၀၀၂ ခုတွင် ကွာရှင်းပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Lagaan ရုပ်ရှင် လက်ထောက် ဇာတ်ညွှန်း ကီရန် ရာဝ် နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ သူ့မှ သားတစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့တယ်။
ဒုတိယ အိမ်ထောင် ကီရန်နဲ့သားငယ် အဇားဒ်။
၁) သား… ဂျုနှိုက်တ် (မိ- ရီနာဟ်)
၂) သမီး… အိရာ (မိ- ရီနာဟ်)
၃) သား… အာဇာဒ် ခါန် ( မိ- ကီရန်)
ပထမဇနီးနဲ့ ရတဲ့ သား ဂျုနှိုက်တ်နဲ့ သမီး အိရာကို ရုပ်ရှင်လာပြတဲ့ အမိရ် (၂၀၀၄)
* ရုပ်ရှင်ဆုနဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု *
အသက် ၈ နှစ် အရွယ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုနဲ့အတူ အမီရ်ပေါက်စ
အမိရ်ခါးန် Awards ပွဲတွေမတက်တာ အစောပိုင်းကတည်းက မဟုတ်ပါဘူး။ Qayamat se Qayamat Tak ရုပ်ရှင်မှာကတည်းက အမိရ်က Film Fare Awards ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ၉၆ မှာ အမိရ်ခါးန် Awards ရဖို့ တစ်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ ရှာရွခ် ရသွားပါတယ်။ အဲ့ကတည်းက အမိရ်က Awards ရှိုးတွေကို အယုံအကြည် မရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဘယ်ပွဲမှ မတက်တော့ပါဘူး။
၁) Film Fare Awards…… (၉) ဆု
၂) National Film Awards (၄) ဆု
၃) AACTA Award (ဩစတြေးလျ)
၄) Douban Film Award (တရုတ်)
၅) National Treasure of India (Government of China)
၆) Academy Award (၂၀၁၂)
၁) Padma Shri (Government of India 2003)
၂) Padma Bhushan (GoI 2010)
၃) Honorary Doctorate (Moulana Azad National Urdu University)
၄) Berlin Film Festival Jury Member (2011)
၅) Time, 100 list of most influence people in the world (2012, 2017)
၆) Member of Academy of Motion picture art and science (2017)
၇) Master Dinanath Mangeshker Award (၂၀၁၆)
၈) Veshesh Puraskar (၂၀၁၆)
အာမီရ် Padma Shri ဆုကို လက်ခံယူနေစဉ်
၇၅ ကြိမ်မြောက် Dinanath Mangeshkar Award ကို RSS အကြီးအကဲ Ram Bagwat ထံမှ
လက်ခံနေစဉ်။ Shanmukhanand Hall, King Circle, မွမ်ဘိုင်မြို့ (Paramod Thakur/ HT ဓာတ်ပုံ)
အမိရ်ခါးန် ရဲ့ လက်ရှိဇနီး ကီရန်နဲ့ Lagaan ရူတင်မှာတွေ့ ပြီး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ပြသနာတွေလည်းတက်ပြီး အမိရ်နဲ့ Rena တို့ ကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။ Dil Chahta Hai ရိုက်ပြီး
နောက်ပိုင်း ၄ နှစ်လောက် အမိရ် ရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ပါဘူး။ပြသနာတွေအေးသွားချိန် ၂၀၀၅ မှာ ကီရန်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အမိရ်ဟာ လက်ရှိ အိန္ဒိယ အနုပညာလောကရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး မင်းသားအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး နဲ့ ကြေးအကြီးဆုံး မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ အမိရ်ရဲ့ ရိုက်ပြီးသား ရုပ်ရှင်ရဲ့ ၀င်ငွေကိုကျော်ဖို့ အမိရ်ခါးန်ရဲ့ နောက်ထပ် ရိုက်မဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုသာစောင့်ရပါမယ်လို့ ဆိုရိုးရှိပါတယ်။
အမိရ်ဟာ မင်းသားတွေအနက် ထူးခြားသူပါ။ အိန္ဒိယလို ဘာသာရေးအကဲဆတ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အမိရ်က ဟဂ်ျလို့ခေါ်တဲ့ ဆော်ဒီအရေဗျကို ဘာသာရေးခရီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ ဟဂ်ျဖတ်ဖူးတဲ့ ဘောလီးဝုဒ် မွတ်စလင်မ်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးမှမရှိပါ။ Dilip Kumar ကစလို့ A R Rahman အဆုံး ဘောလီးဝုဒ် နံမည်ကြီးအကုန် ဆော်ဒီကို အွမ္မရာလို့ ခေါ်တဲ့ ဘုရားဖူး အသေးစားမှာပဲ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပြီး လနဲ့ ချီ ကြာတဲ့ ဟဂ်ျဘုရားဖူးကိုတော့ အမိရ်ခါးန် တစ်ဦးပဲ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
အမိရ်ဟာ ဘယ်သွားသွား သူ့ ကိုယ်ပိုင် ခေါင်းအုံးသယ်သွားလေ့ရှိပြီး ရေချိုးပျင်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမိရ်ဟာ အိန္ဒိယ နံမည်ကျော်တွေအနက် အရပ်အပုဆုံး မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ အမိရ်ခါန်းဟာ ဘောလီးဝုဒ်ရဲ့ Criminal Record ကင်းရှင်းတဲ့ မင်းသားတွေအနက် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး သူ့ ဘ၀မှာ လက်ပါပြီး ရန်ဖြစ်ခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်လောကမှာ မီဒီယာတွေမှာ လှူပ်ခတ်တဲ့အထိ သူနဲ့ ပြသနာဖြစ်ဖူးသူတွေကတော့ Juhi Chawla နဲ့ ရှာရွခ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Juhi နဲ့ ရူတင်တစ်ခုမှာ ငြှိတာဖြစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီသူတို့ ၂ ယောက် စကားမပြောခဲ့ပါဘူး။ ရှာရွခ်နဲ့ ကတော့ ရှာရွခ်ရဲ့ စကားပြောမဆင်ခြင်မှုတချို့ ကြောင့် အမိရ်က မီဒီယာတွေမှာ တန်ပြန်ပြီး စစ်မျက်နှာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ရှာရွခ်နဲ့ လည်း ပြန်ပြေလည်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
* စလ်မားန် နဲ့ ဆက်ဆံရေး *
ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ ခါန်း ကြယ်ပွင့် (၃)ပွင့်
စလ်မားန်ခါန်းကို အမိရ် စိတ်ဆိုးခဲ့ဖူးတာရှိပါတယ်။ သူတို့ ၂ ယောက် ရုပ်ရှင် အတူတူရိုက်တဲ့ Andaz Apna Apna ရုပ်ရှင်ကားမှာ စလ်မားန်က ရူတင်ပျက်တာ၊ အချိန်နောက်ကျတာတွေ ရှိလို့နောက်နောင် စလ်မားန်နဲ့ တွဲပြီး ဘယ်ကားမှ တွဲမရိုက်တော့ဘူးလို့ အမိရ်က ကြေညာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ၂ ယောက် အပြင် ဘ၀မှာတော့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမိရ်ရဲ့ အမေနဲ့သမီးကြီးက စလ်မားန်ခါးန်ဖန်ပါ။စလ်မားန်ရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကိုသာ အမိရ်တို့ မိသားစုလိုက် ရုံမှာ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ကြပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် အီးဒ်ပိတ်ရက်တွေမှာ ရုံတင်လေ့ရှိတဲ့ စလ်မားန်ခါးန် ကားသစ်တွေကို အမိရ်တို့ မိသားစုဆွေမျိုးတွေ အယောက် ၅၀ ကျော် ရုံတစ်ရုံလုံး ပွဲချိန်တစ်ခု ပုဒ်ဖြတ်ဌားပြီး
* အပေါ်ယံ ပရဟိတသမားမဟုတ် *
အမိရ်ဟာ တချို့ သော အနုပညာရှင်တွေလို ပေါ်ပင် ပရဟိတ လုပ်ရတာ ၀ါသနာမပါတာမို့ အတွင်းကျကျ စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး ပရဟိတ လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကို အိန္ဒိယမှာ ဖိနှိပ်ခံ၊ အနိုင်ကျင့်ခံ၊အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေ သိန်းချီထံ ဆာဗေးဆင်းပြီး Satyamev Jayate ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို
စတင်လှူပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက် ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ်ကစပြီး ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင် အမိရ်ရဲ့ ပရဟိတ
လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သီးသန့် လာရောက် အချိန်ပေး လေ့လာခံခဲ့ရသလို တဖက်မှာလည်း အဲ့သလို တကယ်
အားနည်းသူတွေ၊ လိုအပ်နေသူတွေကို ရုပ်ပိုင်း၊ နာမ်ပိုင်း အစစအရာရာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့ အသက်အန္တာရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံရဆုံး အိန္ဒိယမင်းသားဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အင်အားကြီး တူရကီ နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်နဲ့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး သမ္မတအိမ်တော်မှာ
သမ္မတနဲ့ တွေ့ ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ ပထမဆုံး မင်းသား
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နဲ့အတူ အာမီရ် (၂၀၀၉)
ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် အာဏာရစဉ်က သီးသန့် တစ်ရက်အချိန်ပေးပြီး အမိရ်ရဲ့ ပရဟိတ
အာမီရ် ဟာ ပါကစ္စတန် PTI ခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်။ (၂၀၀၄-ပါကစ္စတန်)
လက်ရှိမှာတော့ အမိရ်ခါးန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Dangal မင်းသမီး Fatama Sana Sheikh နဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်နေတယ် ဆိုပြီး ကောလဟာလတချို့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Fatama က ခုနှစ်ထဲ
ထွက်မဲ့ Thugs Of Hindustan ရုပ်ရှင်မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးပါ။ Katrina က အရံမင်းသမီးပါ။ (သီချင်း ၂ပုဒ်မှာ အဓိက ပါဝင်တာကလွဲရင် Katrina နေရာက အရံနေရာဖြစ်ပါတယ်။)
Thugs Of Hindustan ရူတင်က ဆဲလ်ဖီ
* ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထူးခြားချက် *
အမိရ်ခါးန်ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့အနက် နောက်ဆုံး ထူးခြားမှုတစ်ခုကို တင်ပြရင်းပို့ စ်ကို နိဂုံးချုပ်ပါမယ်။ အမိရ်ဟာ ကမ္ဘာတလွှားက ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဘာသာရေး
အဆောက်အဦး(ဘုရားကျောင်း)တွေကို တိတ်တိတ်လေး သွားပြီး လည်ပတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူ မရောက်ဖူးတဲ့ ဘာသာတရားတစ်ခုခုရဲ့ ဘာသာရေး အထင်ကရ နေရာမရှိဘူးလို့ အမိရ်ကဆိုပါတယ်။
သူ့ အနေနဲ့ ဘာသာတရားတိုင်းကို လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် သူ အဲ့သလို သွားရောက် လည်ပတ်ရတာကို နှစ်သက်ပြီး ဘုရားကျောင်းတွေရောက်တိုင်း သူအလှူဒါနပြုလုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းတွေ သွားတဲ့အခါ သူ့ ရဲ့ ကျော်ကြားမှုကြောင့် လူတွေအုံလာပြီး ဘုရားကျောင်းလာသူတွေ အနှောက်အယှက်ြဖစ်မှာ မလိုလားလို့ သူတိတ်တိတ်လေးပဲ သွားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမိရ်ခါးန်ဟာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အထင်ကရ မက္ကာကျောင်းတော်၊ ဆိခ်တွေရဲ့ အထင်ကရကျောင်းတော်Golden Temple, ဟိန္ဓူ၊ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ ရဲ့ အထင်ကရ ဘုရားကျောင်းတွေအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ
Lumbini ထိအောင် သွားရောက်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
ဟဂ်ျဘုရာဖူး မက္ကဟ်ရွှေမြို့တော်၌ အမီရ်
နီပေါနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာ လုမ္ဗနီ ဥယာဉ်တော်ကို ရောက်ရှိစဉ်
1. Aamir Khan Wiki
2. Bollywood Updated News Myanmar
3. NDTV news / Aamir Khan 52th Birthday
Posted by Rohang king at 1:29 PM
Labels: Entertainment, well-known, သုတ